Ngwa Ngwá Ọrụ Weebụ Kasị Mma Dịka Senti
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke nchịkọta data weebụ nke unstructured na ịtụgharị ya n'ime ụdị nke dị maka nchekwa data ma ọ bụ nchekwa kọmputa. Nbudata weebụ gụnyere nbudata weebụ, nchịkọta weebụ ma ọ bụ nyocha ihuenyo nke data weebụ. Maka nchịkọta weebụ nke ọma, ọ dị mkpa ịhọrọ ngwá ọrụ na-ekpochapụ ihe nchọgharị weebụ.
Ihe nchọgharị weebụ na-emekọ ma wepụ ihe ọmụma weebụ dị ka onye ọrụ na-eme mgbe ọ na-eji ihe nchọgharị weebụ dị ka Google Chrome. Ọzọkwa, ngwá ọrụ ndị a na-anakọta data sitere na weebụsaịtị ma debe ya na nchekwa nchekwa. E nwere ọtụtụ ihe nchọgharị weebụ, nke nwere ike inyere gị aka ịchekwa ozi nke weebụsaịtị na nchekwa data. Na SEO isiokwu a, anyị kọwapụtara ụfọdụ ngwaọrụ kacha mma weebụ na-ekpuchi weebụ ndị dị na ahịa:
ofe dị mma. Ngwaọrụ a nwere ụlọ akwụkwọ Python, nke nwere ike ịnweta faịlụ HTML na XML. Ndị ọrụ na-eji usoro Linux dịka Ubuntu ma ọ bụ Debian nwere ike iji ntanetị weebụ a. Ihe dị mma dị nro nwekwara ike inyere gị aka ịchekwaa ebe nrụọrụ weebụ na ebe dịpụrụ adịpụ.
mport.io. Import.io bụ ngwá ọrụ n'efu nke na-enye ndị ọrụ ohere iwepụta data ma hazie ya na dataset. Ngwaọrụ a nwere netwọk nwere njirimara nwere njirimara nke bụ ma mmekọrịta enyi na enyi. Nbudata data adighi mfe!
Mogenda.. Na Mogenda, ị ga-enwe ike ịme ọrụ ntanetị weebụ site na iji njiri na dobe atụmatụ. Isi ihe a ma kpoo ngwanrọ nyere ndị ọrụ ohere iwepu ọdịnaya site na ọtụtụ weebụsaịtị na ụwa.
Parse Hub. Parse Hub bụ ngwá ọrụ na-ekpochapụ ihe nchọgharị weebụ nke enwere ike iji interface. Ndị ọrụ na-enweta UI ha kpọmkwem nke nwere ọtụtụ atụmatụ. Dị ka ọmụmaatụ, iji Parse Hub, ọ ga-ekwe omume ịmepụta API site na weebụsaịtị ndị na-adịghị enye iji nye ha. Ọzọkwa, ndị ọrụ ka nwere ike iwepụta ọdịnaya weebụsaịtị ma chekwaa ya na akwụkwọ ndekọ mpaghara.
Octoparse. Octoparse bụ ngwa Windows n'efu maka ịnakọta ozi weebụsaịtị. Ngwá ọrụ na-ewepụta ihe na ebe nrụọrụ weebụ a na-anakọta data ntanetịghị arụmọrụ ma dezie ya n'ime ụdị ahaziri ederede n'enweghị nzuzo. Ya mere, ọbụna ndị ọrụ nwere ihe ọmụma mmemme efu nwere ike iji ngwá ọrụ a mee ka ebe nrụọrụ weebụ ha rụọ ọrụ n'ụzọ ha chọrọ.
CrawlMonster. CrawlMonster bụ ngwanrọ nke ọ bụghị nanị ịmepụta ntanetị weebụ kamakwa hụ na ndị ọrụ na-erite uru site na njirimara Search Engine Optimization. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nwere ike nyochaa isi okwu data dị iche iche maka weebụsaịtị dị iche iche.
Ihe omuma. Nkọwapụta bụ ngwá ọrụ na-emepụta ihe nchọgharị weebụ nke ọhụrụ nke na-arụ ọrụ na ọnọdụ akpaka. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nwere ike ịrịọ arịrịọ site na ịnye URL nke weebụsaịtị ha chọrọ iji kpochapụ. Ọzọkwa, Connotate na-enyere ndị ọrụ aka iji ma kpochapụ data weebụ.
Nkịtị ndị nkịtị. Iji ngwá ọrụ a, ọ ga-ekwe omume ịmepụta usoro data ọtụtụ maka ebe nrụọrụ weebụ a na-awagharị. Egwurugwu nkịtị na-eme ka ndị ọrụ ya chekwaa ozi weebụsaịtị na nchekwa data ma ọ bụ nchekwa nchekwa mpaghara. Ọzọkwa, Crawl nkịtị na-enyere ndị ọrụ aka ịnakọta data nchịkọta na ozi meta maka ibe dị iche iche Source .